Iyo blogosphere yakazara nemagazini akawanda kana asingasviki akawandisa, akawanda kana zvishoma kudzidzira uye kukwikwidzana, kupfuura zvishoma zvishoma mukugadzirisa uye kushanda.
Kana iwe ukashamisika kuti sei vakafanana, imwe mhinduro ndeyekuti ivo vanoshandisa iwo iwo akafanana Mazano Management Systems – WordPress, kunyanya, asi kunyange Joomla! uye Drupal inouya yechipiri uye yechitatu maererano mushumo wekuongorora wechangobva kuitwa naW3Techs.
Ehe, iyo Webhu yakagadzirwa neWordes, Joomlas uye Drupals. Asi ndiko kuguma kwahwo šeit? Ko kana zvese zvauri kuda zviri nyore bhurogu mhinduro, imwe isingatore zvakawandisa mawebhusayithi zviwanikwa asi ichiri kukuvimbisa akavimbika maturusi?
Kune zvimwe (zviduku) mabhoji ekugadzirisa kunze uko
Kunzwa senge kuyedza nemapuratifomu aya? Ramba uchiverenga. Ndiri pano kuti ndiite sumo. 😉
2 2. Čirps
7 Nei Usati Wambonzwa nezvavo Kare
FanUpdate pakutanga yakasikwa naJenny Ferenc yewebsite yePrism-Perfect.net, asi paakaenderera mberi kubva purojekiti, musimboti wevashandisi vekanyorwa rake akaenderera mberi achida kubatsirwe nekugadziriswa, Sakas Sangano revanokunda paNework.com vakatora mvura yepurojekiti uye yakaramba ichiwedzera FanUpdate (ikozvino pakusunungurwa kwayo kwechitatu). Atbalstīt atjauninājumu inoparidzirwa pasi pegwaro reGPL.
Pārdevēja Webhusaiti: http://www.jemjabella.co.uk/scripts/fanupdate/ (inongogadziriswa chete iripo pashure pe FanUpdate.net yakavharwa)
FanUpdate ir viens no galvenajiem jautājumiem, kas saistīti ar HTML īsziņu veidni yakagadzirira pane webhusaiti yako kuti ienderere mberi. Vashanyi vanogona kutaurira zviri nyore nezvekupinda kwenyu uye vane mavatars avo kuburikidza nekubatanidzwa kweGravatar. Tsvina yepa spam uye mavoti ekuongororwa maitiro zvinobatsira kuchengetedza nzvimbo yako kubva mukushungurudzwa. 3. versija yakagadziridzwawo chikamu chekare chekuchengetedza bug.
Kuti FanUpdate ir izstrādāts newebhusaiti, mapeji ako anofanira kutakura .PHP faira rekuwedzera, nekuti ndiyo mutauro unodudzira kodhi
Pazasi rūts fanUpdate’s yakajairika koda fragments kuiswa kwaunoda blog yako inoratidzwa – kazhinji, yako Index.php faira:
// Emuārs FanUpdate XY0
// subjekts: dzose posts
need_once (‘/ mājas / lietotājvārds / public_html / fanupdate / show-blog.php’);
Iyo skrini iri pamusoro yakatorwa kune yangu yewebhu webhusaiti iyo inoshandisa FanUpdate seye blogging mhinduro.
Rimwe rematambudziko makuru ekushandisa FanUpdate ir anti-spam sistēma. Iyo skripts inogona kuona mhando dzakajairika dzemhinduro dze spam – kunyange nekuda kwezita remashoko nemitsara iwe unogona kukanganisa muPaneti yeZvi – asi sneakier spam mazwi achawanzogamuchirwa pasina kunyange kutumira chikumbe chekuenzisa. Kana ukashandisa FanUpdate, iva nechokwadi chekutarisa mazita eAkubvumirwa, gaidot uye Spam mazwi kanomwe kamwe pavhiki, nokuti bhulogi yako hurongwa inogona kunge yakagamuchira mhinduro ye spam uye isa mhinduro yakarurama muSpam pane.
Chimwe chinogadzika ndechekusakwanisika kuita chero chinhu kunze kweFanUpdate asi mabloggi. Iwe haugone kugadzira mapeji, haugone kuisa plugins, nezvimwe. FanUpdate ndeyechokwadi yakakosha bhurogi rekushandisa kune madiki mawebhusayithi anomhanya pakubata kwekutambira aine mashoma zviwanikwa.
Chyrp inongova CMS inenge ichida kuva shanduko shoma shoma kune WordPress. Alex Suraci pakutanga akatanga Chyrp semushandi wekuita basa mu 2004, saka yakazove yakagadzirwa naArian Xhezairi mu2010, uyo akapfuurira mberi. Zvinyorwa zvitsva zvinouya nezvinyorwa zvakadzama uye musangano unotsigira shure.
MySQL 4.1 + kana SQLite 3 + (ar ACVN)
Pārdevēja Webhusaiti: https://github.com/chyrp/chyrp
Chiri nyore kuisa, yakanyatsogadzirwa uye yakareruka, Chyrp ndiyo yakachengeteka uye inoshanda zvakanyanya imwe nzira kuFanUpdate. Chyrp inogona kukwidziridzwa kuburikidza neModules uye Dudziro saka inonyanya kurongeka uye, kana iwe uchiziva zvishoma templates uye PHP chirongwa, chinogona kuchinja chigadziriswa. Zvinyorwa izvi zvichakupa nhungamiro yakajeka uye inonzwisisika yekukurumidza kushanda.
Imwe nzira inofadza yekuwedzerwa kweKyrp ndeyePeathers. Mhemberero inobatanidza chidzidzo chekutanga chekuwedzera mamwe mabasa akaoma. Chimiro ndicho Chirevo, nhepfenyuro yenyaya dzinokubvumira kuti uwedzere musoro wepamusoro uye tsananguro kune zvinyorwa zvako.
Mharidzo mharidzo-zvakanaka, kungoita shanduro yenyaya. Iko hakuna chizvarwa cheWYSIWYG chinoshanda neCyrp. Zvisinei, inogona kugoverwa kuburikidza neModule ne Redactor.
OpenBlog ir lietotājdraudzīga emuāru veidošanas platforma, kuras pamatā ir CodeIgniter PHP dhizaini. Izvo zviri nyore uye hazvizoremeri maseva ako, asi seWordPress neChirp, zvinotsigirwa nenharaunda inogadzira iyo inopa zvinyorwa, plugins uye kuwedzerwa. OpenBlog inotsigira mitauro yakawanda uye inoburitswa pasi pe GPL v3 rezinesi.
Pārdevēja Webhusaiti: http://open-blog.org
OpenBlog ndeye mushandisi-inoshamwaridzika seWordPress inogona kuva yekutanga, asi zvinonakidza zvakafanana kune wepakati kune mushandisi wepamberi. Kuisirwa otomatiki uye ma veidnes akajairika – uye nharaunda yacho inopa zvakakwana sarudzo yemetemplate zvakadaro.
Chimwe chinhu chinonakidza mu Administrator Panel iyo Dhatabheki Backup: bhatani rinoverengwa pane yako padivi padivi uye paunodzvinyora iwe unowana pakarepo .ZIP bhatani faira kurodha. Zviri nyore.
Es URL esmu ievainojis yekutsvaga yakanaka uye chikwata chinotsigira mapeji, RSS uye WYSIWYG redaktoru. Spraudņi inokubatsira kuti uwedzere chikwata chako uye izvi zvakanyanya kufanana neShokoPress, naizvozvo hapana chakaoma zvakare ipapo.
Kana iwe uchingotanga nekubloga uye iwe usingade kuyedza WordPress, OpenBlog inoita imwe nzira inoshanda.
Kusiyana neWordPress, OpenBlog veidne modificēta, lai mainītu mani uz Admin Panel yako. Iwe uchafanirwa kuisa shanduko yacho manna uye wobva wadzoreredza mafaera kuburikidza neFTP.
Pakutanga yakasikwa naScott Evans nekuda kweweite site yebhandi yake, Pixie yakatanga kuva CMS isingarevi asi yakagadzikana – kana sevanokurudzira vachida kuidana, "Muduku, Nyore, Muiti Wemiti". Pixie inoshandiswa, inotsigira mitauro yakawanda uye inosunungurwa pasi peiti yeGPL v3.
Pārdevēja Webhusaiti: http://www.getpixie.co.uk
Kune kutanga, jūsu programmatūra, kas ir ievietota 2.28 MB apjomā, piemēram, Pixie imidžs ir īss, bet CMS ir īss,.
Zvinonakidza kuti Pixie anotsigira XFN’s mikroformati. Izvi zvinobatsira kuchengetedza zvese zvinongedzo kublogi rako zvine musoro kune yekutsvaga injini uye attēluhu vakafanana (kureva kuti, kana munhu akatarisisa peji rekunobva peji uye awona rudzi rwehumwari hwawakashandisa ‘,’ mukadzizi ”, ‘mukadzizi’, ‘mukadadzi’, etc..
Pixie inotsigira CSS Zvinyorwa uye mabhuku ekuchengetedza mabhuku. Kuti uchengete DB yako, enda Zvirongwa -> Rezerves -> Dublējuma datu bāze: sistēma ichaumba a .ZIP faira pane serveris ir unogona kuikwanisa nekunyanya kubudiswa kwaizoonekwa pane peji.
Pixie haisi yemushandisi-ine hushamwari sezvaingaite senge. Kana iwe ukashandiswa kugadzira mabloggi mapepa uye mapeji iwe anozvishambadzirawo, iwe uchaodzwa mwoyo – kugadzira mapeji matsva paPixie, iwe unofanirwa kurova Iestatījumu rūts ma tabo makuru uye uzvisika kubva ipapo. Cilne Publicēt ichakugonesa iwe kuzvigadzirisa. Pamusoro pezvakanyorwa, hapana tepi – unofanira kudzokera kune informācijas panelis, skira pasi kuenda ku ‘Kurumidza Ungano’ uye tinya ‘Wedzera nyowani Blog Rangu rekupinda’ (apo ‘Blog Rangu’ ndiro rako blog blog)
PivotX ndiyo nzvimbo yakazaruka yekugadzirisa mhinduro yakagadzirwa neboka rezvipiri uye rakabudiswa pasi peGPL licence. Inotsigira vanyori vakawanda, Extensions uye Widgets kune mamwe mabasa.
Pārdevēja Webhusaiti: http://pivotx.net
Kuisirwa kwe7 MB – kwete manhenga asi iko kuchine chiyero chisina kujeka che canon. Iyo inouya nekadhibhodhi yakafanana neiyo yeWordPress asi yakatonyanya kutaridzika.
Mēs atrodamies unogonā kunyora zvinyorwa zvako uye mapeji ewebsite yakotsati Mokupinda uye Mapeji, izvo zvakanyatsotsanangurwa pakutanga kwekuona: pasi peKunyorerwa uye Mapeji une chigadziro izvēlējās chekuumba nekuchengegazazavira kunga kundzi .
Pārvaldīt multividi yakafanana neWordPress ‘Media uye inokugonesa kurodha mifananidzo yako, mafaera uye matemplate. Iwe unogona kugadzirisa ako emazuva ano template mafaira mukutarisa kwemavara.
Chinhu chimwe chandinoda pamusoro pePivotX ndechokuti iwe unogona kutamba ma weblogs akawanda uye ma subweblogs uye iwe unogona kuisa maonero acho nekupa zvikamu zvakasiyana siyana uye matanho kune mumwe nomumwe.
Mukuwedzera, es esmu unogona kusarudza kuchengeta deta kana pane mafaira akapfigira kana dhesi reMySQL. Faira mafaira haisi yakachengeteka, zvakadaro.
Iyo yekudzidzira līkne yakadzika zvishoma pane yeWordPress, sezona chimiro chayo chiri kushoma-mushandisi, asi izvi bīstavidziviriri sezvo software iri yakanaka. Nzira yakanaka yekutanga kuverenga kuverenga zvinyorwa uye kuziva iyo terminology uye admin paneļa zvikamu, zvakasiyana neye WordPress kana mamwe maCMS.
Cutenews idiki blogošanas skripts yakagadziridzwa neYoungNews Team. Iyo yakapfupika backend-chete yekubloga chikuva seFanUpdate, asi iyo inoita kushandisa kwemafirata mafaira panzvimbo peMySQL dura rekuchengetedza data.
plakanie faili glabāšanai
Pārdevēja Webhusaiti: http://cutephp.com
Shanduro dzemazuva ano dzeDunenews dzakafanana zvikuru neShokoPress mukuoneka uye mukushanda. Cutenews inowedzera kuburikidza ne plugins uye moduļi uye mabhizimisi maduku anogona piemēramga reisensi yekushandiswa kwebhizimisi. Icho chinouya nebasa rekutsvaga, mafaira ekudzikisa uye zvingaita kuchengetedza (uye kudzorera) zveshanduro dzakachengetedzwa. Cutenews inotsigira UTF-8 uye IP inorambidza.
Nei Usati Wambonzwa nezvavo Kare
Paunenge uchingove kutanga nebhurogi, iwe unonyanya kuda kutevera masasi ekutya kutorerwa. Kad esat pausina kumbobvira wabata CMS, vienreizēju WordPress ziņojumu (kanāla kungo jaunākās ziņas WordPress.com kontā), jūs unotanga neyepamberi tēmu. Kana iwe unogona kuisa Joomla! kana Drupal, sarudza ganda rinokosha uye tanga kutumira iyo yakakoshesa nzira, iwe uchitevera imwe yemakumi chiuru konsultācijas inowanikwa paWebhu kugadzirisa yako blog.
Kune rumwe rutivi, kusvika pakuziva mamwe mhinduro – uye uzvipe iwe zvimwe sarudzo – zvinoda kutsvakwa, nguva uye kuzvipira. Saka Neicho Chiri Chokwadi Zano Rakanaka Kuti Tsoka Dzako Dzinyorove neiyo inonyanya kuzivikanwa CMS, Funga Kupa imwe nguva yekutsvaga Nekuyedza dzimwe Nzira.
Ndinogona kukuvimbisa, zvinonakidza. 😉
Mufananidzo unofadza nezveStuart Miles / FreeDigitalPhotos.net